Owona mkhonyovu uthandwa kakhulu kwi-Intanethi 🥇 nguEmulator. Online ▷ 🥇
Ngophuhliso lobuchwephesha, iimfuno zethu ziya zijolise ekusetyenzisweni kwetekhnoloji ngokwayo, ukusuka kuthungelwano lwentlalo ukuya kuthungelwano, ekuthengweni kwe-Intanethi kwezona zinto zilula zobomi bemihla ngemihla. Ke akunamsebenzi ukubonisa ukuba nabakhohlisi bazigqibile iindlela zabo zokufumana abasebenzisi abahluphekayo ezandleni zabo. Ngapha koko, ubuqhetseba kwi-Intanethi buthabatha ithuba lokuba novelwano, uloyiko nokubawa kwabasebenzisi Internet.
Kule nqaku siza kuhlalutya Owona mkhonyovu uxhaphakileyo nosetyenzisiweyo kwihlabathi likwi-intanethi.
FUNDA OKANYE: Ungasiphepha njani ispam kunye ne-SMS scam
1. Izithembiso ezibaxiweyo:
Amaxhoba ayarhwebesheka ngokusebenzisa amabinzana asebenzayoumsebenzi ogqibeleleyo cofa nje kude. Sinceda ukuba uyifumane"OKANYE"Sebenza ekhaya kwaye urhola ngaphezulu kweshumi ngaphezulu!".
Enye yezona zaziwa kakhulu, ngoku ziyaqhubeka Facebook iminyaka ethile, bubuqhophololo be Isibhengezo sikaRay Gcwalisa ngomfanekiso kunye nexabiso lokuthengiselana: ngokungenangqondo lo mkhonyovu wenze kwaye uyaqhubeka nokwenza amaxhoba amaninzi athi, etsalwe lixabiso le-19,99 euros, atyekele ekucofeni emfanekisweni. Ngezi zihlandlo, ixhoba likhokelwa ukuba likholelwe ukuba ngokunikezela isixa semali okanye iziqinisekiso zabo zebhanki, baya kuba nakho ukufumana umsebenzi ogqibeleleyo ngaphandle kwemizamo okanye imveliso ngexabiso lesaphulelo, ewe, elingenakuze lifike.
2. Iinkonzo zokuqokelela amatyala:
Kule meko, ixhoba licinga ukuba ngokuhlawula isixa semali esilingana nepesenti yento etyaliweyo, iqela labantu liya kuwenza ngokwawo onke amatyala. Akukho nto inokuba bubuxoki ngakumbi, kuba ixhoba alinakuze libone ukuba amatyala alo anelisekile, kodwa, endaweni yoko, liya kuzifumana lisengxakini enkulu.
Uthungelwano alusoloko lufihla ubuqhetseba, kodwa akuqhelekanga kubantu ababonelela ngemisebenzi ekhaya ukuba banganyaniseki njengoko kubonakala ngathi.
4. "Yizame mahala":
... kwaye simahla emva koko ayisiyiyo. Indlela yokumisela ukuba abakhohlisi bathembisa ukusebenzisa inkonzo okanye okwexeshana, ngaphandle kwentlawulo, ingxaki ke iya kuba yinto engenakwenzeka ukuba isifundo sikhuphe kwinkqubo ababhalise kuyo, benyanzelwa ukuba bahlawule okuthile. ke ayinamdla.
5. "Ufuna imali-mboleko?":
Olu lolona hlazo luphambili apho abantu abaninzi, amaxesha amaninzi sele benamatyala, baqhubeka nokuwa ngokungathandekiyo. Ngokwenyani igama "imali mboleko" isetyenziswe ngendlela engeyiyo njengesifanokuthi segama "inzala"Ngapha koko, kuhlala kusenzeka ukuba abo bangasemva kwezi zinto bacele imali yokuvula iinkqubo baze banyamalale kumoya ocekeceke. Kwimeko yemali mboleko kunye neemfuno zemali, kuhlala kucetyiswa ukuba unxibelelane namaziko ebhanki awaziwayo.
6. Ubusela besazisi:
Ngelishwa kulula kakhulu ukufaka umkhonyovu kwaye ixhaphake kakhulu kwixesha lothungelwano lwentlalo. Ukukhululeka kokubamba abanye sele kusekwe, kodwa eyona nto imbi kakhulu kukuba kwimeko ezininzi ixhoba liyakuqonda ukuba sele kusemva kwexesha. Ngale ndlela, ubuqhetseba bamatyala obenziweyo, enyanisweni, buyenyuka ubusela-Ubuqhetseba kubandakanya ukubiwa kwedatha yobuqu neyemali kwaye emva koko uyisebenzise ukufaka isicelo semali mboleko okanye ukuthenga izinto kwi-intanethi; konke ukwenzakalisa amaxhoba anokukwazi ubuqhetseba kuphela xa, umzekelo, bazama ukufaka isicelo semali mboleko kodwa bayaliwe ngenxa yokungahlawuli imali esebenze ngabaqhatha. Ke ngoko, kuyafuneka ukuxela imeko kwabasemagunyeni kwaye uqhubeke nesicelo sokwala ukusebenza.
7. Uphumelele i-10.000 euros! okanye "SIMAHLA i-iPhone 10 eyenzelwe wena ukuba ucofa apha!":
Ngubani ongazange abone ezivelelayo ezifanayo ngelixa ubrawuza iwebhu? Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ungaze ucofe kwezi zinto, kuba kwezona meko usuleleka yintsholongwane ngelixa eyona imbi, umntu angahlola iPC yakho ukude, ebe lonke ulwazi oluyimfuneko ukufikelela, umzekelo, iiakhawunti zakho zebhanki. .
FUNDA OKANYE: Kufuneka wenze ntoni ukuba i-Intanethi ithi "Halala, uphumelele"; ungayiphepha njani okanye uyibhloke
8. Fowunela u-800 ***** ufumanise ukuba ngubani umntu omthandayo oyimfihlo ":
... kwaye ngokuqinisekileyo ayithandi; Xa ubiza la manani, enyanisweni, umrhumo wonxibelelwano uwodwa unokubiza imali eninzi kwaye iinkonzo ezingacelwanga zinokuhlawulisa izixa ezingalinganiyo.
9. Ukuthengisa kwiWebhu:
Kule meko kuhlala kulungile ukuthemba iisayithi ezisemthethweni ed ugunyazisiwe thenga uthengise kwiwebhu. Ngapha koko, into eyaziwayo kunye negama elaziwayo, kulula ukuba ufumane iziza eziba ilogo kunye nolwazi lwentengiso ekuthethwa ngayo, kwaye emva koko uhambise iimveliso ezinesiphene kwabo banelishwa abasemsebenzini okanye imveliso ethengwayo ayisiyiyo. ayizange ihanjiswe kumamkeli. Ukungena, iwebhusayithi inokubonakala ngathi iyintsusa, kodwa inyani yokuba izinto ezininzi ezithengiswayo zingama-50% isaphulelo kufuneka kuvakale umnxeba wokuvusa umkhonyovu onokubakho.
FUNDA OKANYE: Ungayithenga njani kwi-eBay ukuthintela imikhonyovu
10. Ubuqhetseba nge-imeyile yeShishini
Ezinye zeentlobo zobuqhetseba ezichaphazela ngakumbi iinkampani, apho abophuli-mthetho bangena kunxibelelwano lwabo lwezorhwebo nezinye iinkampani, okanye ezo zabaphathi benkampani enye kwaye, benemiyalezo engeyonyani kodwa bethathelwa ingqalelo ngamaxhoba , Ukuguqula izixa ezikhulu ekujongeni iiakhawunti egameni labakhwabanisi.
FUNDA OKANYE: Qaphela ii-imeyile ezingezizo, ezikhohlisayo nezinganyanisekanga
ivela kumanyano phakathi kweekhonsepthi ze "ilizwi" mi "Ubuqhetseba besazisi" kwaye ngumkhonyovu ojolise ekudibaniseni ulwazi lweedatha zabasebenzisi kunye nokusetyenziswa kweefowuni ukubakhohlisa.
Isaziso sifika kwiselfowuni okanye kwibhokisi yeposi yamaxhoba, ngokucacileyo avela kwiziko labo letyala, bexela ukuthengiselana okukrokrelayo okunxulumene neakhawunti yabo: umsebenzisi ochaphazelekayo sisilumkiso sokucofa kwidilesi ye-Intanethi yesiza esenziwe Eli nqaku lifumana umnxeba, owenziwe ngenombolo yasimahla, apho abakhohlisi bezenza ngathi ngabasebenzi bebhanki abafuna ukubuyeka ubusela ngelixa, zakuba nje zifunyenwe iikhowudi zokufikelela, bavumela ukuhanjiswa okanye ukuhlawulwa ngasemva kwexhoba.
12. Ubuqhetseba bebhonasi yokuhamba:
la UMphathiswa weNdalo ugxeke indlela iingxelo ezininzi ezisandula ukufika ngayo, ezivela kwabo banomdla wokusebenzisa ibhonasi yokuhamba malunga nobukho bezicelo ezahlukeneyo ezinenjongo yokukhohlisa abasebenzisi ngamagama abambekayo anje "Ivawutsha yokuhamba 2020". Isebe linxibelelana ngendlela iinkqubo zokunxibelelana ngebhonasi ezaziswa ngayo ngamajelo asemthethweni kwiintsuku ezininzi phambi komhla wokuthumela izicelo. Izicelo ezikhohlisayo sele zixeliwe kwabasemagunyeni abanobuchule.
I-Ransomware luhlobo lwenkohliso apho abahlaseli bafaka i-malware kwikhompyuter okanye kwinkqubo yekhompyuter ethintela ukufikelela kwexhoba kwiifayile zazo ngokufuna intlawulelo, ihlala ikwimo ye-bitcoin, ukuyirhoxisa. Izirhintyelo zenkohliso zenkohliso zinokuba yingozi kakhulu: imeko enobuqhetseba yokuhlawulela ubuqhetseba ijongela phantsi ukhuseleko kunye nemfihlo yexhoba, nakwinto eyahlukileyo eyoyikisayo, abahlaseli bafaka ibango nge-imeyile ukuba baqhekeze ikhamera web ngelixa ixhoba libukele imovie. iphonografi.
Intengiso ye-cam-hacking, ixhaswe kukuphindwaphindwa kwephasiwedi yomsebenzisi kwi-imeyile, yindlela yokubamba: nokuba usithumelela ii-bitcoins okanye sithumela ividiyo kubo bonke abafowunelwa. Ngokwenyani, oku kukuziphatha okucocekileyo-abakhohlisi abanazo iifayile zevidiyo kwaye abade bagqogqe kulwazi lwakho, njengoko igama lokugqitha abathi babenalo laqokelelwa kulwazi olukhoyo lwegama eligqithisiweyo kunye neimeyile ezivuzayo.
Ukongeza kukuhlala uphaphile, iingcali zincomela oku kulandelayo:
ngaphambi kokufaka iinkcukacha zekhadi lakho letyala kwindawo, kufuneka uyiqinisekise ukhuseleko;
Meyi thumela ezabo iikhowudi zokufikelela kwiakhawunti yokukhangela - iibhanki, enyanisweni, umzekelo, ungaze ucele iziqinisekiso zokungena ebhankini ekhaya nge-imeyile okanye ngomnxeba;
unayo isilumkiso xa kuthunyelwa iikopi zamaxwebhu kucelwa;
Sukukhuphela Meyi izinamathiselo ezifika nge-imeyile okanye umyalezo obhaliweyo ukuba awuqinisekangaUbume kumthumeli;
ngalo naluphi na uhlobo lokuthandabuza okanye lwengxaki uhlala unxibelelana abasemagunyeni abanobuchule.
Kule nto songeza ithuba lokusebenzisa inkqubo ye-Anti-Rhlengware ngokuchasene nentsholongwane yeNtlawulelo okanye i-Crypto
FUNDA OKANYE: Iiwebhusayithi ezikhohlisayo ezinobuqhetseba kwi-intanethi